वामदेवको विरासत : चम्किलो विगत, धमिलो वर्तमान – Sky News Nepal
वामदेवको विरासत : चम्किलो विगत, धमिलो वर्तमान
१७ श्रावण २०७७, शनिबार १८:३४ मा प्रकाशित
साउन १७ , काठमाडौं ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नाम लिँदा अचेल मानिसहरुको दिमागमा एउटा अस्थिर एवं ढुलमुले चित्र सामुन्नेमा देखा पर्छ । पार्टीभित्र जारी दुई लाइन संघर्षमा वामदेव कहिले प्रचण्ड-माधव समूहतिर, कहिले केपी ओलीतिर ढल्कने गरेको देखिन्छ ।तर, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा वामदेव गौतमको नाम अहिलेजस्तो धमिलो थिएन, चम्किलो थियो । यो छोटो आलेखमा वामदेव गौतमको विगत र आगतबारे छोटो चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
वामदेवका सबल पक्ष
-वामदेव गौतम हक्की स्वाभावका नेता हुन् । अरुले आँट गर्न नसकेका काम र निर्णयहरु उनी गर्न सक्छन् । ०६२/०६३ सालमा माओवादीसँग सहकार्य गर्ने हिम्मत वामदेव गौतमले नै गरेका हुन् । केपी ओलीले विरोध गर्दागर्दै उनी माओवादीसँग वार्ता गर्न रोल्पासम्म पुगेका थिए ।
– गौतमले पञ्चालयकालमा नारायणी पश्चिमको तराईमा हलीको भेष धारण गरेर भूमिगतरुपमा संगठन गरेका थिए । एमालेले नौ महिने सरकार चलाएका बेला केन्द्रीय संगठन हाँकेका गौतमलाई त्यसबेला एमालेभित्र कुशल संघटक पनि मानिन्थ्यो र त्यसबेला पश्चिम तराईमा उनी लोकप्रिय नेताका रुपमा परिचित थिए ।_पूर्वमाले, एमाले र अहिलेको नेकपामा वामदेव गौतमको वरीयता निकै पुरानो हो । पार्टीभित्रको इतिहासको हिसाबले उनी केपी ओलीको विकल्पमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको समेत हैसियत दाबी गर्न सक्ने सिनियर नेता हुन् । यही कारणले गर्दा वामदेवले आफूलाई ‘भावी प्रधानमन्त्री’ र ‘भावी अध्यक्ष’का रुपमा सोच्ने गरेका छन् ।
– धेरैपटक उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री भएर सरकारमा गएका वामदेवसँग सरकार सञ्चालनको अनुभव पनि छ । मनमोहन र माधव नेपालका पालामा उपमहासचिव भइसकेका गौतमसँग पार्टी सञ्चालनको पनि अनुभव छ ।
९निकटस्थहरुका अनुसार नेता गौतम व्यवहारिक राजनीति र संगठनमा मात्र होइन, सिद्धान्त र विचारको मामिलामा पनि चासो राख्छन्, लेख्छन् र योजना निर्माण, विचार निर्माणमा अग्रसर हुन्छन् । यसअर्थमा उनी ‘प्लानर’ र ‘विचार निर्माता’ पनि हुन् । एमाले फुटाएर नेकपा माले बनाउँदा पनि जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) नछाडेका गौतमले मदन भण्डारीलाई यसमा सुरुदेखि नै साथ दिएका थिए ।
– नेकपाको स्थायी कमिटी वा संसदीय दलभित्रको वर्तमान समीकरणमा गणितीय हिसाबले वामदेवको ‘स्ट्रेन्थ’ खासै देखिँदैन । तथापि पार्टीको दैनन्दिन काम गर्नै सचिवालयमा वामदेवको महत्व छ । ९ सदस्यीय सचिवालयमा गौतम जुन गुटमा लाग्छ, त्यतै बहुमत पुग्ने भएकाले उनलाई केपी ओली र प्रचण्ड दुबैले महत्व दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली उनको घरसम्म धाउनुको अर्थ पनि यही हो ।
– वामदेव गौतमले ५० को दशकसम्म जुन लोकप्रियता आर्जन गरेका थिए, त्यो क्रमशः गुमाउँदै गइरहेका छन् । उनको लोकप्रियताको ग्राफ दिनानुदिन ओरालो लागिरहेको छ । आफू अलोकप्रिय हुँदैछु भन्ने कुरा गौतमले थाहै पाउँदैनन् । या, थाहा पाएर पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । जस्तो-०७० सालको चुनाव हारेपछि उनले अरुलाई राजीनामा गराएर पनि सांसद हुन गरिरहेको जोडबलले उनलाई अलोकप्रिय एवं सत्तालोलुप नेताका रुपमा चिन्हाएको छ । तैपनि उनी लगातार त्यही प्रयासमा छन् । संविधानै संशोधन गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री हुन खोज्छन् । जानकारहरुका अनुसार वामदेवको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नै के हो भने आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि जुनसुकै काम गर्न हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने उनको धारणा छ । जस्तो९ बल्खुमा पार्टी कार्यालय बनाउँदा उनले नाजायज ढंगबाट आर्थिक संकलनमा जोड गरेका थिए । सत्ता टिकाउन सांसदहरुको खरीद विक्रीलाई पनि जायज बताएका थिए । एमाले विभाजनका बेला नेपाली कांग्रेसबाट पैसा लिनसमेत तयार भएको त्यसबेलाका नेताहरु बताउँछन् । र, पछिल्लो उदाहरण९ राष्ट्रियसभाको सदस्य बनेर प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संविधानै संशोधन गर्न उनले जोडबल गरेका थिए । नेता गौतमका यस्ता स्टेपहरुले उनलाई अलोकप्रिय बनाउने र विवादमा मुछ्ने गरेको छ । जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने भन्दा पनि मनोगत रुपमा चल्ने यो उनको स्वाभावजन्य कमजोरी हो ।
– आफ्नो निहीत उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि जायज९नाजायज सबै काम गर्न हुन्छ भन्ने मान्यता बोकेका गौतमको संगत पनि केही विचौलिया एवं खराब छविका मानिसहरुसँग हुने गरेको छ, जुन उनको अर्को कमजोरी हो । जस्तो- जतिखेर लोकमानसिंह कार्कीको र जगज थियो, त्यसबेला बानेश्वर हाइटमा रहेको कार्कीको निवासलाई केही विवादास्पद व्यक्तिहरुले आफ्नो अड्डा बनाएका थिए । र, त्यो अड्डामा वामदेव गौतमका एकमात्र छोरा पनि जाने गरेका थिए । तिनै छोरामार्फत जोडिएका केही विचौलिया अहिले पनि वामदेवको किचनसम्म पुग्ने गरेका छन् । यसरी विचौलियाहरुको संगतमा पर्दा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका सुधीर बस्नेतले वामदेव गौतमको ५० लाख रुपैयाँ खाइदिएको र बैंकको ऋण तिर्न घरै बेच्नुपरेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।
– पार्टीभित्र कुशल संघटक भनिए पनि नेता गौतमले आफ्नो गुटका मानिसहरुलाई साथमा राख्न सकेनन् । आफैं पनि कहिले झलनाथतिर, कहिले ओलीतिर दौडधूप गर्दा उनी ‘सेनाविनाको सेनापति’ जस्तो बन्न पुगे । अहिले स्थायी कमिटीमा रहेका किरण गुरुङ, रघुवीर महासेठ उनलाई छाडेर ओलीतिर लागिसकेका छन् । स्व। रविन्द्र अधिकारीले पनि उनलाई भन्दा ओलीलाई साथ दिन थालेका थिए । अहिले ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा गौतम एक्लै छन् । केन्द्रीय समितिमा चाहिँ बलराम बास्कोटा, हरि पराजुली लगायतका नेताहरुले उनको साथ छाडिसकेका छैनन् । यसरी आफ्नो समूहका मानिसहरुलाई टिकाउन नसक्नु नेता गौतमको अर्को कमजोर पाटो हो ।
– उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनेर सरकारमा रहँदा पनि नेता गौतमले आफ्नो छवि लोकप्रिय बनाउने भूमिका खेल्न सकेनन् । पहिलो कार्यकालमा आइजीपी नियुक्तिको विवादमा परे । पछि गृहमन्त्रीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको तस्वीर भाइरल भयो । कोशी नहरको डिमा बसेका सुकुम्बासीको घर भत्काएको भनेर संसदमा तत्कालीन एमालेकै सांसदले गौतमको विरोध गरे । सारतः सरकारमा रहँदा नेता गौतमले जनपक्षीय एवं लोकप्रिय काम गरेको रेकर्ड खासै छैन ।
– नेता गौतमले आफ्नो कर्मक्षेत्र बर्दियाबाट पछिल्लो समय चुनाव जितेका छैनन् । ०७० सालमा बर्दिया र प्युठानबाट विजयी भएका गौतमले बर्दिया छोडेर प्युठान उक्लिए । तर, ०७४ को चुनावमा उनी बर्दियाबाट हारे । ०४८ /०५१ को चुनावमा बर्दियाबाट दुईचोटि चुनाव जितेका र पञ्चायतकालदेखि नै नारायणी पश्चिममा लोकप्रिय रहेका गौतम कसरी जनतामाझ कटिँदै गएका छन् भन्ने कुराको प्रमाण बर्दियामा व्यहोरेको चुनावी पराजय हो ।
– जता लाग्दा पनि पूर्णरुपमा हेलिने स्वाभावका कारण नेता गौतम बढी विवादमा तानिने गरेका छन् । जस्तो_ माधव नेपाल र प्रचण्ड समूहको सुरुको झम्सिखेल बैठकमा वामदेवले ओलीलाई तत्काल दुबै पदबाट हटाइहाल्नुपर्छ भनेका थिए, जतिवेला प्रधानमन्त्री ओली युरोप भ्रमणमा थिए । त्यसबेला माधव नेपालले त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर गौतमलाई ‘स्पिड ब्रेक’ गराउनुपरेको थियो । तर, अहिले उनै गौतम अर्को किनारामा पुगेर ओलीको बचाउमा लागेका छन् । यस्तै आक्रामक भूमिकाले गर्दा गौतमलाई अहिलेको पुस्ताले अडान नभएको एवं ढुलमुले नेताका रुपमा बुझ्न थालेको हो । गौतमलाई नजिकबाट चिन्ने नेताहरु भन्छन्९ वामदेव कामरेडको कम्पासमा शून्य डिग्रीपछि एकैचोटि १८० डिग्री मात्र छ, कम्पासको वीचमा अरु कुनै अंक छैनन् ।
_नेता गौतमको विरासत वैचारिकरुपमा प्रगतिशील नेताको जस्तो पनि बने पनि पछिल्लो समय उनी फेरि जबजकै पक्षमा अडिएका छन् । जबकि देशको राजनीति जबजभन्दा अगाडि बढिसक्यो । यो अवस्थामा गौतमले आफूलाई ‘विचारधारत्मक अपडेट’ गर्नुको साटो यथास्थितिवादी बनाउन थालेको प्रतीत हुन्छ । यतिमात्रै नभएर संघीयता, पहिचान लगायतका एजेण्डाहरुमा पनि गौतमको अरुची देखिँदै आएको छ ।
– आफ्ना कमजोरीहरुबारे चर्चा गर्दा स्वयं नेता गौतमले चाहिँ जिन्दगीमा दुईवटा भुलहरु गरेको निकटस्थसँग बताउने गरेका छन् स् पहिलो भुल नेकपा एमाले फुटाएर माले बनाउनु । र, दोस्रो भुल_गत महाधिवेशनमा केपी ओलीलाई सघाउनु ।
विगत र आगतका व्यवहारहरु हेर्दा यस्तो लाग्छ९ गौतम विवेकमा भन्दा बढी आवेगमा चल्ने नेता हुन् ।
वामदेवका लागि अवसरहरु
वामदेव गौतम नेकपाभित्र अवसर नै नभएका निरीह अवस्थामा पुगिसकेका नेता भने होइनन् । उनले आफ्नो कमजोरीलाई सच्याएनन् भने मनोगतवादले असफलतामा पुर्‍याउने सम्भावना बढी देखिन्छ । तथापि, उनीसामु केही सम्भावना पनि देखिन्छन् ।
भर्खरै केपी ओली समूहले नेता गौतमलाई केही आश्वासनहरु दिएको बुझिएको छ । जस्तो९मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुँदा वामदेवपत्नी तुलसा थापालाई मन्त्री बनाउने ।
महाधिवेशनअघि नै केपी ओलीले पार्टी अध्यक्ष पद त्याग गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने माधव नेपालको साटो वामदेवलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने ।
वीचैमा पार्टी फुटिहाल्यो भने ओली समूहको पार्टी अध्यक्ष गौतमले सम्हाल्ने ।
आगामी महाधिवेशनमा एकल अध्यक्षका लागि केपी ओली समूहले वामदेव गौतमलाई नै उम्मदेवार बनाउने । अनि, अर्को चुनावपछि गौतमलाई पार्टीको एकल अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाउने ।
यस्ता आश्वासन अहिले केपी ओली समूहबाट नेता गौतमले पाएका छन् । र, पछिल्लो परिस्थितिले के देखाउँछ भने वामदेव गौतमका अगाडि अवसरै अवसर छन् ।
किनभने, उनलाई ओली पक्षले मात्र होइन, माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षले पनि आफूसँगै राख्न चाहेको छ । गौतमलाई यही कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा लैजाने आश्वासन सो समूहले नेता गौतमलाई दिएको छ ।
वामदेव गौतमका सामु चुनौतीका पहाड छन् । जस्तो-
– आफ्नो घट्दो लोकप्रियता र बिग्रँदो छविलाई कसरी सुधार गर्ने ? बदनामीहरुबाट कसरी बच्ने ?
– एकीकृत पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा जानका लागि आगामी चुनावमा कसरी विजय प्राप्त गर्ने रु जिल्लामा आफूविरुद्ध भड्किएको जनमतलाई कसरी आफूतिर आकर्षित गर्ने ?– आफू पूर्वएमालेको पुरानो एवं सिनियर नेता हुँदाहुँदै पनि आफ्नो गुट भत्काएर पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा पेण्डुलम बनिरहने कि स्थिर भएर कुनै एउटा निश्चित विन्दुमा अडिने ?
– पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा आफ्नो स्थान केपी ओली समूहतिरै हो कि अर्कोतिर ? वा आफैंले पो कुनै गुट बनाउने हो कि ? यो चुनौती वामदेव गौतमका सामु तेर्सिएको छ । अहिलेसम्म माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओलीलाई सघाउँदै आएका उनी आगामी महाधिवेशनमा के गर्लान् ? यो सम्भवतः उनैलाई थाहा छैन ।
केपी ओली पक्षले महाधिवशेनपछि अध्यक्ष बनाउँछु भने पनि प्रचण्ड-माधव पक्षको सहयोग नलिएसम्म बहुमत जुट्ने देखिँदैन ।
नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको जन्म विसं । २००५ साल असार २६ गते प्युठानको दाखाक्वाडीमा भएको हो । उनी अहिले ७२ वर्ष पुगेका छन् । गौतमका हजुरबा सामन्त थिए, पिता धनी किसानमा झरे । उनीचाहिँ आफूलाई मध्यम वर्गको भन्न रुचाउँछन् । वामदेवको विगत निकै नै संघर्षपूर्ण आवेगहरुमा बितेको थियो । पाँच वर्षदेखि विद्यालय जान थालेका गौतमको ७ वर्षमै ब्रतबन्ध भयो । ९ वर्षको हुँदा ज्योतिष अध्ययन गर्न गुल्मीको गुरुकुलमा भर्ना भए । तर, उनको स्कुले जीवन निकै अस्थिर बन्यो ।
संस्कृत पढ्न छाडेर उनी प्युठानकमै आधार पाठशालामा ५ कक्षामा भर्ना भए । मोहन विक्रम सिंहको संगतमा पर्नै लागेका थिए, यहीवीचमा लाहुरे बन्छु भन्दै घरबाट सुन लिएर भागे । तर, ठगले सुन लगेर विचल्लीमा पारिदिएपछि उनी घर र्फकन बाध्य भए ।त्यसपछि घर परिवार, स्कुल सबै ठाउँमा उनीमाथि अपमानजनक व्यवहार हुन थाल्यो । उनी मुक्ति हाईस्कुलमा ६ कक्षामा भर्ना भए । त्यहाँबाट ८ कक्षा पास भएपछि साहुका छोराहरुसँग लागेर बनारस गए । त्यहाँ घरेलु कामदारका रुपमा १५ दिन काम गरे ।प्युठानमा गौतमको परिवार कांग्रेस थियो । उनका मामा प्युठान कांग्रेसका संस्थापक एवं २०१५ सालका निर्वाचित सांसद थिए । बनारसमा निर्वासित जीवनमा रहेका मामाको साथ लागेर गौतम गोरखपुर पुगे । र, एउटा साथीको सहयोगमा नेपाल फर्किए । बेखर्ची अवस्थामा रहेका वामदेवलाई टिकुरीका घमानसिंह केसीले बाग्लुङ लगे ।
प्युठानमा कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्पर्क नभएपछि खर्चको जोहो गरेर भारतको मुम्बईमा पुगे । त्यहाँ जवलपुरमा १० दिनसम्म एउटा पसलमा काम गरे । त्यसपछि नेपालगञ्ज हुँदै सुर्खेत पुगे । त्यहाँस्थित रजेना प्राविको प्रअ बने । त्यहाँ पनि धेरै समय टिकेनन् र विद्रोह गरेर बर्दियातिर लागे ।अन्ततः बर्दिया नै नेता गौतमको राजनीतिक कर्मथलो बन्यो । त्यहाँ उनले केही समय जिल्ला पञ्चायत कार्यालयमा मुखियाको जागिर खाए । सब इन्स्पेक्टर बनेर ‘वनजाँचे’ को जागिर गरे । कम्युनिष्ट अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गरे ।
भारतको असाम जान भनेर हिँडेका उनी वीरगञ्जमा निस्किए । भैंसालोटनमा एक रात बिताएर फेरि भैरहवा फर्केर रक्सी कारखानामा एक हप्तासम्म काम गरे । लुम्बिनी पुगेर बुद्धशिला र अशोक स्तम्भको पहिलोचोटि दर्शन गरे । फेरि भारत पुगेर एउटा कलेजमा तीन महिनाजति चौकीदारी गरे । अनि फेरि मजदुर बनेर कम्युनिस्ट पार्टीमा काम गर्छु भन्ने सोचेर नेपाल फर्किए । र, भैरहवाको ठुटेपिपलस्थित माछा फार्मको मुखिया बने । पक्लिहवा क्याम्पसमा भर्ना भए ।यही क्रममा जीवराज आश्रति मार्फत कम्युनिष्ट पार्टीको सम्पर्कमा आए । विद्यार्थी आन्दोलन भयो, गौतम पक्राउ परे । दोस्रोपट पार्टी सदस्यता लिए । मोदनाथ प्रश्रतिले गौतमलाई पार्टी सेलमा संगठित गरे । गौतमले कम्युनिष्ट साहित्य अध्ययन गर्न थाले । सुरुमा कृषि फार्ममै काम गरे । त्यहीँ उनले सेल कमिटी गठन गरेपछि मोदनाथले उनलाई एरिया कमिटीमा बढुवा गरे । मोदनाथ पक्राउ परेपछि एरिया कमिटीका सचिव सीताराम किसान पलायन भए । र, गौतम एरिया कमिटीको सचिव बने । त्यसपछि उनले पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर भूमिगत बन्न पाउँ भन्दै पार्टीमा निवेदन हाले । गौतमको भूमिगत राजनीतिको औपचारिक यात्रा पाल्पाबाट सुरु भयो । तर, एक महिनापछि नै उनी रुपन्देही फिर्ता भए र सालझण्डी क्षेत्रमा खटिए । जिल्ला कमिटीमा उक्लिए ।
पञ्चालतकालमा गौतमले रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुको इञ्चार्ज भएर काम गरे । २०२७ सालतिर किसान आन्दोलन चर्किँदा उनी सोही क्षेत्रमा कार्यरत थिए । ०२९ सालपछि कार्यकर्ताहरुको भागाभाग, पलायन र विभाजन सुरु भयो । पुष्पलालको पार्टीभित्र विद्रोह भयो । ०३० सालपछि मुक्ति मोर्चा बन्यो । पुष्पलाल र तुल्सीलालवीच अन्तरविरोध चर्कियो । उनी को – अर्डिनेशन केन्द्रसँग नजिकिन थाले । सोहीबेला उनी पक्राउ परे र दुई वर्षजति जेल बसे । जेलभित्रैबाट उनले कोअर्डिनेसन केन्द्र तीनचोटि सदस्यता नवीकरण गरे । यो समूहलाई झापा विद्रोहवाला समूहका रुपमा चिनिन्थ्यो । २०३५ सालमा यो माले भयो र पछि एमाले भयो ।जेलबाट निस्केपछि वामदेव गौतम नेकपा (माले) को सम्पर्कमा पुगे । सुरुमा गण्डकी९धौलागिरीको इञ्चार्ज बने । एक समय सुदुरपश्चिमको पनि इञ्चार्ज बने ।
ओली समूहको पेलान
तर, एमाले ९ महिने सरकारबाट सरकारबाट बाहिरिएपछि ओली समूहको दबावमा गौतमको उपमहासचिव पद खारेज भयो । त्यसबेला पार्टीभित्र वामदेवको लोकप्रियता बढेकाले ओली पक्षले अपमानित ढंगबाट गलहत्याएको गुनासो गौतमले निटस्थहरुसँग गर्दै आएका छन् । ओली समूहले उपमहासचिव पद अबैधानिक भएको बताएको थियो ।२०५४ सालसम्म आइपुग्दा पार्टीभित्र वामदेव गौतम र केपी ओलीपक्षवीच दुरी बढ्दै गयो । पार्टीभित्र संस्थापन पक्ष र सीपी मैनाली पक्षवीच अन्तरसंघर्ष चर्किइरहेकै थियो । जबज पक्षमै भए पनि ओली समूहको लखेटाइमा परेका वामदेवले आफू जबजको पक्षधर हुँदाहुँदै पनि नौलो जनवादी धारका सीपी मैनालीलाई साथमा लिएर नेकपा माले बनाए । ०५६ को चुनावमा मालेले शून्य सीट हात पार्‍यो । ०५८ सालमा वामदेव पुनः एमालेमै फर्किए ।सूत्रहरुका अनुसार त्यसबेला वामदेवलाई एमालेमा भित्र्याउन केपी ओली तयार थिएनन् । तर, तत्कालीन महासचिव माधव नेपालको अगुवाईमा गौतम समूह मातृपार्टीमा फर्कियो । एमालेमा आएपछि गौतमले माओवादीलाई शन्ति प्रक्रियामा ल्याउन भूमिका खेले । त्यसो गर्दा ओली पक्षले उनलाई माओवादी परस्त भन्दै कडा आलोचना गर्‍यो ।
आफूले ०५४ सालमा ओलीबाट धोका पाए पनि अन्ततः नवौं महाधिवेशनमा वामदेव गौतमले केपी ओलीलाई सघाएर अध्यक्षमा जिताए । संसदीय दलमा पनि झलनाथ खनाललाई हराएर ओलीलाई जिताउन वामदेवले निर्णायक भूमिका खेले ।यसको साटो ओलीले संसदीय दलको नेता बनाउन वामदेवलाई दिएको वचन पूरा नगरेकोमा गौतमले चित्त दुःखाउँदै आएका छन् । त्यतिमात्रै होइन, बर्दियामा आफूले चुनाव हार्नुमा पनि अन्तरघातले काम गरेको गौतमको दाबी रहँदै आएको छ ।
आखिर, जति नै विरोधाभासापूर्ण सम्बन्ध रहेता पनि अहिले फेरि गौतम र ओलीवीच डिनर मिटिङहरु चल्न थालेका छन् । यसका पछाडिका प्रमुख पात्र हुन्- विष्णु पौडेल ।
विष्णु पौडेल ‘फ्याक्टर’
वामदेव गौतम र विष्णु पौडेलवीचको सम्बन्ध अहिलेको होइन, धेरै पुरानो हो । विगतमा माले९एमालेवीच चर्को विवाद हुँदा पनि वामदेव र विष्णुवीच घनिष्ठता यथावतै थियो । दुबै लुम्बिनीका नेता हुन् । वामदेवले पौडेलको गृहजिल्ला पाल्पामा पनि काम गरेका छन् भने रुपन्देहीमा दुबैले सँगै काम गरेका छन् । पार्टीभित्र पूर्वेलीहरुको बोलवाला भयो भन्ने उनीहरुवीच क्षेत्रीयताले पनि काम गरेको छ ।एमालेको नौ महिने सरकारका बेला वामदेव र विष्णु पौडेलको हल अझै दह्रोसँग गाँसियो । माधव नेपाल, केपी ओली सबै मन्त्री बेनका बेला यी दुबै नेता सरकारमा गएनन् । बर्दियाबाट जितेका वामदेव उपमहासचिव थिए भने पाल्पाबाट निर्वाचित पौडेलले युवा पुस्ताका कनिष्ट हुँदाहुँदै एमाले संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मा पाएका थिए । त्यसबेला गौतम र पौडेलले देश दौडाहा गरेर संगठनमा मेहनत गरे र आफ्नो क्षितिज फराकिलो बनाए ।एमाले र मालेको एकतापछि शुरुमा वामदेव गौतम केपी ओलीको पक्षमा थिएनन् । आठौं महाधिवेशनमा गौतमले झलनाथलाई सघाएका थिए ।
तर, नवौं महाधिवेशनमा विष्णु पौडेलले नै फकाएर गौतमलाई ओलीसँग गठबन्धन गराएका हुन् । वामदेवलाई संसदीय दलको नेता बनाउने ओलीको वचनका साक्षी पनि पौडेल नै हुन् । (ओली)प्रचण्डवीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको साक्षीजस्तै) पछिल्लो समय केपी ओली संकटमा पर्दै गर्दा वामदेवलाई ओलीसँगै राख्न विष्णु पौडेलले भूमिका खेलिरहेका छन् । पूर्वएमालेभित्र विष्णु पौडेल निकै चतुर एवं शक्तिशाली खेलाडी मानिन्छन् । बालुवाटारको चारआना जग्गा प्रकरणमा मुछिनुचाहिँ पौडेलको राजनीतिक जीवनमा सबैभन्दा ठूलो ‘सेटब्याक’ हो ।(यो आलेखमा विष्णु पौडेलका बारेमा थप चर्चा गर्ने उद्देश्य छैन । वामदेवको सन्दर्भमा छोटो चर्चा गर्नुपरेको मात्र हो ।)
अन्त्यमा, वामदेव ओली सम्बन्धकै विषयमा चर्चा गरेका बिट मारौं –
इतिहासले पनि कहिलेकाहीँ मजाक गर्दोरहेछ । उसबेला वामदेव गौतमलाई माओवादीपरस्त भएको आरोप लगाउने केपी ओलीकै नेतृत्वमा अहिले माओवादीसँग पार्टी एकता भएको छ । र, वामदेवचाहिँ पार्टी फुटे पनि फरक पर्दैन भन्ने लाइनमा उभिएर केपी ओलीको आश्वासनको दोस्रो कोसेली फुकाउने तयारीमा देखिन्छन् ।
आखिर यही नै त हो उर्जाशील वामदेव गौतमको भवितव्य –चम्किलो विगत, धमिलो वर्तमान ! (अनलाईन खबर)